TOP NEWS: Saraakiisha Ciidamada Dowalda oo sheegay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay gacanta lagu soo dhigay Amiiro alshabaab ka tirsan | Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Saraakiisha Ciidamada Dowalda oo sheegay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay gacanta lagu soo dhigay Amiiro alshabaab ka tirsan
Monday February 6, 2017 - 11:04 under Somali News by Tifaftiraha K24
Wararka ka imaanayadeegaano ka tirsan Gobollada baay iyo bakool ayaa waxa ay sheegayan in ciidamada xooga dalka ay howlgal qorsheysan ka sameeyeen deegaanadaasi ayna kusoo qab qabteen amiiro ka tirsan alshabaab.
Saraakiisha ciidamada xooga dalka qeybta 60-naad ayaa sheegay in howlgalaan lagu soo qab qabtay hogaamiyayaal ka tirsan alshabaab oo ku sugnaay deegaano ka tirsan baay iyo bakool kadib markii ciidamada xooga dalka iyo ciidanka k/galbeed oo iskaashanaya ay howlgalo xiriir ah sameeyeen.
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka qeybta lixdanaad Ibraahim Aadan Yarow ayaa sheegay in howlgaladii ugu dambeeyay ee laga sameeyay baay iyo bakool lagu soo qab qabtay Amiiro ka tirsan alshabaab hadana ay ku jiraan gacanta ciidamada xooga dalka.
Taliyaha ma uusan sheegin magacyada iyo halka ay ka qabteen amiiradaan shabaabka ka tirsan ee uu sheegayo in gacanta dowlada ay ku jiraan.
Wuxuu shaaciyay taliyaha in cadaaladda la horkeeni doono ragaan ay gacanta ku dhigeen marka ay dhamaadaan baaritaanada hada lagu wado.